Ungasifaka kanjani isicelo se-visa yabafundi baseJalimane?
Kulesi sihloko, sizonikeza imininingwane yokuthi ungayithola kanjani i-visa yabafundi baseJalimane kulabo abafuna ukuya eJalimane njengomfundi. Ngendlela, kufanele kukhunjulwe ukuthi ngaphezu kwemininingwane equkethwe kule ndatshana, eminye imininingwane nemibhalo kungacelwa, futhi vakashela ikhasi le-consulate laseJalimane.
Kungakhathalekile ukuthi yisiphi isizathu sokuhamba, ifomu lesicelo kumele ligcwaliswe kuqala ngama-visa wokuhamba waseJalimane. Kuyadingeka ukusebenzisa ipeni elimnyama bese ugcwalisa zonke izikhala ngamagama amakhulu ngenkathi ugcwalisa ifomu lesicelo. Ifomu lesicelo se-visa laseJalimane elilungiselelwe lithunyelwa esikhungweni sesicelo kanye nomuntu ohamba kanye neminye imibhalo ezocelwa ngokwesizathu.
I-visa edingekayo eJalimane ingenye yama-visa adingekayo emazweni aseSchengen, futhi ngenxa yesicelo seminwe esikhishwe ngo-2014, abantu kumele futhi bahambe lapho befaka isicelo. Njengoba sifuna ukunikeza imininingwane ngemininingwane yokufaka i-visa abafundi abafuna ukuyithola ku-athikili yethu, sizokunikeza okudingayo ukwazi ngaphansi kwesihloko se-Student Visa Application for Germany.
IJalimane vakashela Imibhalo YeVisa Yabafundi
Imibhalo edingekayo kulabo abafuna ukuya eJalimane nge-visa yabafundi ifaka ipasipoti, ifomu lesicelo kanye nesitatimende se-akhawunti yasebhange. Ngezansi ungathola imininingwane enemininingwane yesihloko ngasinye.
Ukusebenza kwepasipoti kufanele kuqhubeke okungenani izinyanga ezi-3 ngemuva kokuba i-visa yamukelwe.
Akufanele ikhohlwe ukuthi ipasipoti onayo akumele yeqe iminyaka eyi-10 futhi okungenani amakhasi ama-2 kufanele angabi nalutho.
Uma uzofaka isicelo sepasipoti entsha, kudingeka uthathe amapasipoti akho amadala uhambe nawo. Ngaphezu kwalokho, ngesicelo se-visa sabafundi eJalimane, ikhasi lesithombe lepasipoti yakho nekhophi yama-visa owatholile eminyakeni eyedlule ye-3 ayadingeka.
Ifomu eliceliwe kufanele ligcwaliswe ngokunaka imininingwane eshiwo ngenhla.
Kubhekelwa ekhelini elifanele nemininingwane yokuxhumana.
Uma umfundi ofaka isicelo se-visa engaphansi kweminyaka engu-18, abazali bakhe kumele bagcwalise bese besayina ifomu ndawonye.
Kanye nefomu lesicelo, kucelwa izithombe ezi-2 35 × 45 mm zebhayomethrikhi.
Isitatimende se-akhawunti yasebhange
Umfakisicelo kumele abe nemininingwane ye-akhawunti yakhe yasebhange futhi kumele kube nemali ku-akhawunti.
Isitifiketi somfundi esinesiginesha emanzi siyadingeka yisikole.
Kumuntu ngamunye ongaphansi kweminyaka eyi-18, kucelwa igama lemvume kumama nobaba ngesikhathi sokufaka isicelo.
Futhi, kulabo abangaphansi kweminyaka eyi-18, kucelwa amadokhumende anqunywe ngokuya ngeqembu labazali babo, ngoba izindleko zizokhokhwa ngabazali babo.
Amasampula wesiginesha wabazali ayathathwa.
Umuntu ozothola i-visa kufanele anikeze ikhophi kamazisi, ikhophi yesitifiketi sokuzalwa, nomshuwalense wezempilo wokuhamba.
Uma uhlala ehhotela, imininingwane yokubhuka iyadingeka, uma uhlala nesihlobo, incwadi yesimemo iyadingeka.
# IJalimane vakashela Imibhalo YeVisa Yabafundi
# Ifomu Lokufaka Isicelo
# Isitatimende se-akhawunti yasebhange
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-10 ezedlule, ngoFebhuwari 13, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngo-Ephreli 20, 2021.
Ungayithola kanjani ilayisense yokushayela eJalimane?
Imibhalo Iyadingeka Yokuthola Imvume Yokuhlala eJalimane
I-visa yaseJalimane, ukuhlangana komndeni, i-Germany session kanye nemvume yokusebenza